‘आफैं दाँत माझ्न सक्ने या दाह्री आफैं काट्न सक्नेसम्मको सक्रियताले यो लडाइँ जित्न सकिन्न, अब राजीनामा दिनुस् प्रधानमन्त्री ज्यू !’ « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
‘आफैं दाँत माझ्न सक्ने या दाह्री आफैं काट्न सक्नेसम्मको सक्रियताले यो लडाइँ जित्न सकिन्न, अब राजीनामा दिनुस् प्रधानमन्त्री ज्यू !’
प्रकाशित मिति : २०७६, १३ चैत्र बिहीबार १५:२२
यो लड़ाइँ अब एउटा भाइरससँगको मात्रै होइन । विज्ञप्ति निकालेर आज यति जना सङ्क्रमित भए भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन । यो त दुई चार हप्तामा सकिएला पनि । तर यो ग्लोबल क्राइसिसले अन्तजस्तै हामीकहाँ पनि अभूतपूर्व आर्थिक र सामाजिक सङ्कट निम्त्याउने पक्का छ । यसका लागि एकीकृत रूपमा तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकता हुन्छ । देश केही हप्ता ठप्प हुने लक्षण देखियो । दैनिक ज्यालादारीमा जीवन धान्नेलाई के गर्ने ?
बाटोमा पोलेको मकै र चटपटे बेचेर गुजारा गर्नेलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? दैनिक गिटी कुटेर छोराछोरीको मुखमा माड़ लगाउने आमालाई के गर्ने ? खलासीलाई के गर्ने ? कपाल काटेर जीविका चलाउनेलाई के गर्ने ? सानो बिजनेश चलाएर छोराछोरी पढाउनेलाई के गर्ने ? सबै राष्ट्रिय महत्त्वका योजना थला पर्ने देखियो, तिनलाई कसरी जीवन दिने ? थला परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी ट्ऱ्याकमा ल्याउने ? बढ्दो मुद्रास्फीति रोक्न के गर्ने ? यो सङ्कटको अन्त्यमा विश्वभर उत्पादनभन्दा माग बढ़ी हुँदा हुने मूल्यवृद्धिले निम्त्याउन सक्ने भयङ्कर व्यापारघाटा रोक्न के गर्ने ? वैदेशिक मुद्राको मुख्य आय रेमिट्यान्स नसोचेको गतिमा घट्ने निश्चित छ, त्यो ग्याप भर्न के गर्ने ? यो सङ्कट भारतमा गहिरो हुँदै गयो भने यहाँ खाद्य सामग्रीको चरम अभाव हुन सक्छ, त्यतातिर कसले कदम उठाउने ?
यो लड़ाइँ अब एउटा भाइरससँगको मात्रै होइन । विज्ञप्ति निकालेर आज यति जना सङ्क्रमित भए भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन ।
किड्नीको सिकिस्त बिरामीलाई समेत रूघा लागेको भरमा सामान्य मेडिकल सुविधा समेत नभएको चितवनको कोरोना हस्पिटल रिफर गरिएको र त्यहाँ तिनको मृत्यु भएको घटना हाम्रो समग्र सिस्टमप्रति ठूलो झापड़ हो ।
विज्ञान र चिकित्सा शास्त्रले पनि ओलीजीलाई ६ महिना सक्रिय जीवनमा फर्किन सक्ने देख्दैन । आफ्नो दाँत आफै माझ्न सक्ने या आफ्नो दाह्री आफै काट्न सक्नेसम्मको सक्रियताले यो लड़ाइँ जित्न सकिन्न ।